‘शक्तिशाली’ प्रधानमन्त्रीका अवसर र चुनौती | Everest Times UK
खिम घले –
आधुनिक नेपालका जननिर्वाचितहरुमध्ये एमाले अध्यक्ष केपी ओली सबैभन्दा शक्तिशाली प्रधानमन्त्री बन्दै छन् । इतिहासमा जंगबहादुर सबैभन्दा शक्तिशाली शासकको रुपमा दरिएका थिए, अनि राजाहरु । तर, जनताको अभिमतबाट आएका प्रधानमन्त्रीहरुमध्ये ओली सबैभन्दा शक्तिशाली बनेका छन् । अभिमतका हिसावले र राज्य संयन्त्रका प्रशासनिक अवयवहरुका कारणले ।
आइतबार साँझ उनले संसदको तीन चौथाई मत पाएका छन् । एक्लै पार्टीको बहुमत नभएको अवस्थामा विश्वासको मत लिन पर्ने संबैधानिक व्यवस्था अनुसार उनले संसदमा विश्वासको मत लिएका थिए । त्यसमा उनको बिपक्षमा नेपाली काँग्रेसले मात्र मत खसायो । नेपाल मजदुर किसान पार्टीले मतदानमा भाग लिएन भने नयाँ शक्ति पार्टीका एक मात्र साँसद डा. बाबुराम भट्टराई देश बाहिर रहेकाले मतदानमा सहभागी हुन पाएनन् ।
वाम गठबन्धनका साझेदार माओवादीसमेतको समर्थनमा एमालेका अध्यक्ष केपी ओली प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका हुन् । पार्टी एकीकरणकोसमेत संघारमा पुगेको एमाले र माओवादीकै साँसदहरु जोड्दा संसदमा स्पष्ट बहुमत छ । तर, ओलीले आफ्नो सरकारलाई धेरैभन्दा धेरै दलको समर्थनमा बनाउने उदेश्यका साथ दुई मधेसवादी दलसहित अन्य दलहरुसंग पनि छलफल चलायो । आइतवार साँझसम्म आइपुग्दा संघीय समाजवादी फोरम, राजपा, राप्रपा, राजमोलगायतका दलहरुले उनलाई समर्थन गरे । संसदमा उनले २०८ मतसहितको विश्वासको मत पायो भने विपक्षमा ६० मत मात्र खस्यो । यस हिसावले उनी अहिलेसम्मकै संसदमा सबैभन्दा धेरै प्रतिशत साँसदको समर्थन भएको प्रधानमन्त्री हुन् (सर्वसम्मत सरकार बनाउँदाको अवस्थामा बाहेक) । यस अर्थमा उनी शक्तिशाली छन् । कुनै कानुनले शासन प्रशासनमा समस्या ल्याएको अवस्थामा नयाँ कानुन बनाउनका लागि धेरै सजिलो बनेको छ ।
अर्कोतर्फ प्रधानमन्त्री भएको केही दिनमै प्रशासनिक ढंगबाट पनि उनले सबैभन्दा शक्तिशाली प्रधानमन्त्री बनाइसकेका छन् । सरकारका महत्वपूर्ण जासुसी र दण्डका लागि अनुसनधान गर्ने निकायहरुलाई उनले आफ्नो माताहात ल्याएका छन् । गृह मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको राष्टिय अनुसन्धान विभाग, अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको राजश्व अनुसन्धान र सम्पत्ति सुद्धिकरण विभाग तथा समाज कल्याण मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको राष्टिय तथा अन्तर्राष्टिय गैरसरकारी संस्थाहरुको मापदण्ड बनाउने तथा अनुगमनको जिम्मेवारीसमेत आफ्नो माताहातमा ल्याएका छन् ।
यी निकायहरु अन्तरिक प्रशासनका लागि सबैभन्दा महत्वपूर्ण छन् । यि अंगहरुसंग दण्ड सजाय गर्ने मात्र होइन, सूचनाहरु संकलन गर्ने र कारवाहीको प्रकृयामा लैजाने अधिकार छ ।
सबै शाक्ति आफुमा केन्द्रित गर्नका लागि यि निकायहरु आफ्नो माताहातमा राख्नुलाई अनौठो मान्नु पर्दैन । सरकारमा रहेका बरिष्ठ मन्त्री तथा उच्च प्रशासकीय अधिकारीहरुकै संलग्नता अनियमितताहरु हुने गरेकाले प्रधानमन्त्रीले यि अस्त्रहरु तिनीहरुलाई नियन्त्रण गर्नको लागि प्रयोगमा ल्याउन सक्नु पर्छ ।
मुलुकलाई साँच्चि नै सुशासन, अमनचयन, विकास र समृद्धिको बाटोमा लैजाने हो भने केही हदसम्म सरकारको नेतृत्व गर्ने र राज्यको बागडोर संहाल्ने व्यक्तिले शक्ति आफ्नो हातमा लिनुलाई अस्वभाविक मान्नु पनि हुँदैन ।
राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग गोप्य सूचनाहरु भेला पारेर मुलुकको बाह्य र आन्तरिक सुरक्षा चुनौतीहरु मात्र होइन, सबै प्रकारका अपराधहरुकोसमेत विश्लेषण गर्ने निकाय हो । मुलुकमा गूप्तचरीको रुपमा रहेको औपचारिक एउटै मात्र संस्था हो यो । यसको मुलुकभर सञ्जाल मात्र छैन, यससंग धेरै अनभवी जनशक्ति पनि छ । यसले ल्याएको सूचनाको सही पहिचान विश्लेषण र कार्यान्वयन गर्न सकेको खण्डमा धेरै अपराधहरु रोक्न सकिन्छ र धेरै कामहरु फत्ते गर्न सक्छन् ।
त्यसैगरी मुलुकको आर्थिक स्रोतको सबैभन्दा ठूलो हिस्सा राजस्वबाट आउने गर्दछ । हाम्रो विकास निर्माणको आधार नै त्यही राजश्व हो । तर, राजस्व उठाउने कार्यमा जतिको विक्रिति अन्य क्षेत्रमा कमै छन् । प्रधानमन्त्री स्वयंले सिधै राजस्व अनुसन्धान विभागको नेतृत्व गर्नु भनेको त्यसमा हुन सक्ने विक्रितिहरु हटाउने चाहना पनि हो । यस विभागसंग ठूला व्यापारिक घरानाले कसरी राजस्वमा घोटला गरिरहेको छ, त्यसमा के कस्ता कर्मचारीको मिलेमतो छ भन्ने कुरा पूर्ण जानकारी रहेको छ । विना प्रभाव काम गर्न दिने हो भने मुलुकको विकासका लागि पर्याप्त राजस्व उठ्ने छ । मुलुकमा ठूला घरानाले आफ्नो हिस्साको कर नतिर्ने मात्र होइन, सिमामा न्यूनबीजीकरणदेखि उपभोक्तले तिरेरको भ्याटमा समेत घोटला गर्ने प्रबृत्ति मौलाएको यही कारण उपभोक्ताका लागि कालोबजारी भइरहेको छभने राज्यले ठूलो मात्रमा राजश्व गुमाई रहेको छ । प्रधानमन्त्री आफैले यसको नेतृत्व गर्दा यसमा सुधार गर्न सकिने अवसर छ ।
त्यसैगरेर सम्पत्ति सुद्धिकरण विभाग पनि शक्तिशाली निकाय मध्येको एक हो । यसले सरकारी ओहोदामा रहेकाको मात्र होइन, जो सुकैको सम्पतिको स्रोत खोज्न सक्छ । यसले एकतिर भ्रष्टचार गरेर अकुत कमाउनेहरुलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउन सक्छ भने अर्कोतर्फ कर नतिरेर, मनि लाउण्डरिं गरेर वा अन्य अवैध धन्दा गरेर करोडौं कमाउनेहरुलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउने ल्याकत यस निकायले राख्दछ । विना कुनै आयस्रोत करोडौं रुपैयाँ खर्चेने विलासी जीवन विताउनेहरुलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन सकिन्छ । अझ यसले गर्ने अनुसन्धानमा आफ्नो सम्पत्तिको स्रोत देखाउने दायित्व आरोपी आफ्नै हुन्छ । यसले साँच्चि नै इमान्दारिताका साथ काम गर्ने होभने सुशासनतर्फ मुलुक अघि बढाउन सकिन्छ ।
त्यसैगरी गैरसरकारी संस्थाहरुको मापदण्ड निर्धारण र अनुगमन पनि महत्वपूर्ण विषय हो । नेपालमा आउने बैदेशिक सहायताको ठूलै हिस्सा यिनीहरुको माध्यमबाट आउने गर्दछ । विगतमा मुलुकले आफ्नो प्राथमिकता निर्धारण गर्न नसक्दा ति संस्थाहरुले आफु खुशी खर्च गरेको र प्रभावकारिता नदेखिएको गुनासो आउने गरेको थियो । तर, प्रधानमन्त्री कार्यालय माताहात नै रहने गरी यो निकाय रहँदा यसको प्रभावकारिता थप बढ्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । गैरसरकारी संस्थाहरुसंग रहेको आर्थिक तथा मानवीय स्रोतलाई मुलुकको प्रथामिकताका आधारमा परिचालन गराउन सक्ने हो भने त्यसले निश्चित रुपमा प्रतिफल दिने छ ।
प्रधानमन्त्री ओली जति धेरै शक्तिशाली हुन्छन्, त्यति नै धेरै चुनौतीहरुले घेरिएको हुनेछ । अहिले प्रधानमन्त्री आफ्नो सल्लाहकारहरुको टोली बनाउने तयारीमा छन् । सहयोगीहरुको एउटा समुह तयार भएपनि अझै सल्लाहकारहरु नियुक्त भइसकेका छैनन्, प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमाल बाहेक ।
प्रधानमन्त्रीले माथि उल्लेख गरिएको शक्तिशाली अड्डाहरुलाई हाँक्न, उचित निर्देशन दिन र कामहरु सुचारु गर्नका लागि आफ्नो विश्वासपात्रहरुलाई नियुक्ति गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रधानमन्त्री एक जनाले ति सबै निकायहरु चलाउन सकिने वा मिल्ने पनि होइन, तिनीहरुको जिम्मेवारी संहाल्नेहरु नियुक्त गरिने छन् ।
यसका चुनौती भनेको शक्तिशाली प्रधानमन्त्रीले यस्ता निकायहरुमार्फत लिइने एक्सन कति जायज, यथार्थपरक र सत्यनिष्ठामा आधारित हुन्छ भन्ने नै हो । भलै प्रधानमन्त्री ओलीले सही र राम्रो चिताएर नै कामको थालनी गरेका हुन सक्छन् । तर, ति निकायहरुको जिम्मेवारी लिनेहरुले प्रधानमन्त्रीको हवाला दिंदै शक्तिको दुरुपयोग गरियो भने त्यसले सबैभन्दा खराव परिणाम ल्याउने छ । त्यस्तो अवस्थामा त्यसलाई व्यालेन्समा ल्याउने कुनै निकाय हुने छैन ।
अर्कोतिर शक्तिशाली बनेको प्रधानमन्त्रीलाई उनका वरिपरीकाले गुमाराहमा पार्न पनि सक्ने छन् । शाक्तिशाली व्यक्तिहरुको नजिकमा एक प्रकारको भजन मण्डली तयार हुन्छ । शक्तिशाली प्रधानमन्त्रीले आफ्नो विरोधीहरुलाई वा अलोचकहरुलाई निशाना बनाउनका लागि यि निकायहरु प्रयोग गर्ने छैनन् भन्ने ग्यारेन्टी कसरी गर्ने ?
अनि भजन मण्डलीले प्रधानमन्त्री समक्ष बाहिर जनमानसमा उठेको बिचार र अभिब्यक्तिहरुलाई पुग्न दिने छैनन् । यसले आम मानिस र प्रधानमन्त्रीबीचमा एक प्रकारको संवादहीनताको अवस्था आउने छ । वरिपरिकाले उक्साहटमा लागेर अलोचकहरुलाई सिध्याउनका लागि प्रधानमन्त्रीले यि शक्तिशाली औजारहरुको प्रयोग गरेको खण्डमा प्रजातान्त्रिक मुल्य मान्यताहरु त भत्ताभुंग हुने नै छ, मुलुकको भविश्य पनि अन्धकारतर्फ धकेलिने छ ।